Abiy Axmad oo sameeynayo iskuday kale oo lagu xalinayo muranka Badda Soomaaliya iyo Kenya | SMC
Home WARARKA MAANTA Abiy Axmad oo sameeynayo iskuday kale oo lagu xalinayo muranka Badda Soomaaliya...
Abiy Axmad oo sameeynayo iskuday kale oo lagu xalinayo muranka Badda Soomaaliya iyo Kenya
Waxaa maanta gaaray magalaada Addis Ababa ee dalka Itoobiya Madaxweyne Farmaajo waxaa sidoo kale la filayaa in uu isagana halkaas gaaro Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta. Inkastaa oo madaxdaas ay halkaas uga qayb galayaan shir Goboleedka IGAD, hadana sida ay sheegayaan dublamayaasiyiin ku sugan magalada Addisa Ababa, Ra’iisal Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmad ayaa sameyn doono isku daygii ugu danbeeyay ee uu doonayo in Soomaliya iyo Kenya ku xaliyaan muranka badda si wadaxaajood ah.
MOL ayaa waxaa loo xaqiijiyay in IGAD oo isticmaalayso ururka Midowga Africa, gaar ahaan Komishinka Amniga iyo Nabbada in ay labada madaxweyne ay halkaas kuwada yeelan doonaan kulamo qarsoodi ah. Kulamadaas ayaa waxaa sidoo kale gadaal ka riixaya safiirka dalka Maraynka u fadhiya magaalada Addis Ababa.
Farmaajo ayaan cidka ka talo galin qorshaha ah in uu wada hadal gaar ah uu la furi dalka Kenya.
Previous articleTaliye kuxigeenka saldhigga Booliska degmda CWaaq oo Warbaahin uga waramay Amaanka degmadaas & degaanada hoosyimada (dhegayso)
Next articleIsbahaysi looga dhawaaqi doono Kismaanyo & Siyaasada dalka oo waji cusub galayso